Kedu Teknụzụ Kpochapụrụ na Smartphones? | Martech Zone
Anyị na-abịa na 10th ụbọchị ọmụmụ nke iPhone, ulo oru June 29th, 2007.
Dịka ọ bụla psychopath na-ekwenye ekwenye, smartphones nwere ike itinye ihu ọma. Ha nwere omume enyi, na-enye aka ma dị ka ha agaghị emerụ ijiji. Oge niile ha bụ ndị na-egbu ọchụ bụ ndị na-egbu ume mkpuchi ha na-ehi ụra ma jide n'aka na achọtaghị usoro GPS gị ọzọ. James Pelton
Okwesiri ka ekwuputa na Mobile Text Alerts weputara nke a egbu egbu infographic: Ekwentị ekwentị na - egbu egbu - ejiri Smartphones gbuo ihe ndị ahụ ime emume onwu nke otutu teknụzụ nke enyerela ikpo okwu di ịtụnanya n’ọbụ aka anyị. Nke a bụ teknụzụ 10 nke egburu n'ihi ekele anyị dị ịtụnanya
Oti mkpu mkpuchi - 61% nke ndị ọrụ smartphone na-ekwu na ekwentị ha dochiela elekere mkpu ha.
Watch - Smartwatch Mbupu ebufere swiss nche mbupu maka oge mbụ na 4th nkeji nke 2015.
Ndị na-eme nlekọta ahụike - 58% nke ndị ọrụ ama ama ebudatara ọ dịkarịa ala otu ngwa ahụike.
Ndị na-egwu MP3 - ọnụ ala data atụmatụ na gụgharia ọrụ na smartphones adia.
Igwefoto na gbaa igwefoto - smartphones gua ihe kariri 50% nke onyonyo kesara kemgbe 2011, imekota ya na nnukwu nkweko ahia igwefoto edoziri
camcorder - Yana ese foto, igwefoto camcorder na-agbadakwa.
GPS na Maapụ - Ego TomTom jiri 2 / 3rds gbadaa na afọ 2, ma Google Maps nwere ndị ọrụ ijeri 1 ugbu a (ọ bụ ezie na m ga-ahọrọ Lee).
Landline ekwentị mkpanaaka na - 41% nke ụlọ enwekwaghị ekwentị ekwentị ma ọ bụ naanị ekwentị 100 na-akwụ ụgwọ na Hong Kong.
Newspapers - Smartphones dochie akwụkwọ akụkọ dịka nhọrọ nke ịgụ akwụkwọ maka ụmụ nwoke na mposi.
Egwuregwu - Egwuregwu egwuregwu mkpanaka bụ ugboro 3 nke njikwa njikwa aka ejiri.
flashlights - The ama ọrụ 'ọkacha mmasị ngwa!
Akwụkwọ Adreesị - Gburu site na akwụkwọ ịkpọtụrụ nke gakọrịta ndị anyị na kọntaktị na ọrụ ọrụ anyị niile.
Ndị na-egwu egwuregwu nke onwe - Yana egwu, smartphone bụ igwe onyonyo anyị. Ndị ụlọ ọrụ USB na-aza, yana ọrụ ntanetị.
Ndekọ olu - Cheta dictaphone? Ma m anakwaghị.
Calculator - know ma na i jirila ya gbakọọ ihe ma ọ bụ abụọ.
Notepad - Jot ala ncheta na ndetu.
Foto foto - you hụrụ foto nke nkịta m, Gambino? Enwere m ike inwe 100 n’ime ha na iPhone m.
Weather - Ọ dịghị mkpa ịgbanye ozi ọma ahụ, ọwa Weather dị n'ọbụ aka anyị.
Ogbi ekwentị - not dighi dara ogbi ma ọ bụrụ na i jiri ekwentị tụgharịa, ana m ekwe gị nkwa… mana ị metụghị aka.
Ọzọ - Anyị nwere ike ịchọpụta n’ọdịnihu na electromagnetic radieshon (EMR) emitted site na ekwentị masts na-eme ka nsogbu ndị ọzọ na gburugburu ebe obibi… nọrọ na-ekiri.
Tags: akwụkwọ adreesịmkpu elekeremgbakoCamcorderigwefoto +ekwentịogbi ntịakpa radieshonEmrmma trackerọkụegwuregwuboysgpsEgwuregwu akaekwentị ekwentịodidala alankewamapmp3 ọkpụkpọmusic Playerakụkọntinye ederedeịkwụ ụgwọ ekwentịndị ọkpụkpọ vidiyo nke onwefoto fototụọ ma gbaandị na-edekọ oluekiriweather